Lolu chungechunge, udubuleke uhlobo ka melodrama zomlando, wabutha izilaleli omkhulu wabalandeli. A gem wangempela isithombe kukhona abadlali. "I-Institute for Noble emaNtombazaneni" - iphrojekthi lapho iningi izinhlamvu - enhle yentombazane, umfundi wesikole elite.
Le filimu senzeka e Moscow, lapho kunikezwa isikole amantombazane kusuka emikhayeni ekhomba ngophakathi. Heroine eyinhloko umfundi betadisha esanikwa ikilasi elalithweswa iziqu. Bahlala ngohlelo ekhethekile, lapho nsuku zonke udinga ukusheshe sivuke ukuze ukuya emakilasini, ukulungiselela lo ukuvakashela letimcoka, noma ibhola elilandelayo. Futhi ake Sofyu Gorchakovu, Tattoo Eliya, Asya Chernevskii, Varya Kulakov kanye nowesifazane Turkish Miriam ahlukaniswe kumagazini ka kwezinyanga ezimbalwa, nabo kufanele bamukele kuphole lady hhayi uyephula imithetho eqinile.
Girls inobungane komunye nomunye. Kodwa ngeke akwazi ukwenza ngesikhathi esifanayo kunjalo ngaphandle izingxabano ne-innuendo, imizwa ngomona nangombango. Excellent abathweswe iziqu abadlale abadlali efanayo ajabulisayo.
"I-Institute for Noble emaNtombazaneni": abadlali
Esikhathini chungechunge, lenqwaba izinhlamvu, yingakho abadlali abaningi abathintekayo. Lapha sibona Alice Sapegin (Sofya Gorchakova), u-Alexander Arsenteva (Bala uVladimir Vorontsov), Ivan Kolesnikov (Prince Andrew Khovanskiy), Kseniyu Hairovu (uLidiya Sokolova), Alenu Sozinovu (Miriam), Yuliyu Gusevu (Anastasia Chernevskii), Ekaterinu Astahovu (Tatiana Elias), uPauline Belenkaya (Barbara Kulakov), Evgeny Vodzinskiy (Ekaterina Shestakova), u-Anton Feoktistov (Nikolai Markin), Ivan Ryzhikov (uPlato), Imbewu Spesivtseva (indodana ka-uLidiya), Anatoly Koteneva (Dmitry Zotov) nabanye.
Alice Sapegina (indima - Sofya Gorchakova)
Abaculi izindima eziningi ochungechungeni - a abadlali elaziwayo elincane. "I-Institute of amantombazana yizicukuthwane" baba DEBUT yabo, lapho, naphezu yokungabi nokuhlangenwe nakho, abhekana ngayo indima yabo kahle.
Umlingisikazi Alice Sapegina phambi ifilimu awuzange laziwa kabanzi umbukeli. Wayaziwa futhi abathandwa abalandeli enkundleni yemidlalo, ngoba eMoscow Art Theatre kubo. Lenkom esibabayo yena odlale izindima ezithile ezingukhiye e imikhiqizo efana "Uhlelo Lokumelana Nokucindezela Gynt," "Tartuffe" futhi "ubuhlanya Spanish." Ukuze indima Sofi Gorchakovoy Alice wahlanganyela ifilimu "City Lights", kodwa indima lalilincane ukuze umbukeli akazange abe nesikhathi ukuhlola umlingisi udlala ithalente abasha. "I-Institute for Noble emaNtombazaneni", abadlali esiphelele lidlulisela umoya wokuphila ekupheleni YaseRussia XIX leminyaka, kwaba ukufohla sangempela Sapegin. Yena kahle emelela ekuskrini isithombe sentombazane, ngubani ephethwe hhayi kuphela ukunqoba uthando lwabo, kodwa futhi ukuba ahole ama-Institute kamuva.
Lo mlingisi ezimpini ukudutshulwa 2 no-3 yochungechunge ku Umfundi ka wezemfundo, umfundi yake ubunjalo baso.
Ekaterina astahova (indima - Tata Ilinskaya)
Ekaterina astahova ozalwa-April 24, 1986. Indawo yokuzalwa: Moscow Region, uMnu zemininingwane. "Pioneer" ngempumelelo, watadisha ngesikhathi School of Music futhi kwaba soloist ne studio choral. He is iziqu GITIS, lapho ethola iziqu ngo-2008.
ifilimu yakhe DEBUT ukuthi nabo babeba ngo-2008. Okwamanje, ngemuva ithalente abasha ngaphezu izindima kweshumi. Iqhaza main kukhala kabili ifilimu "The Ballad of idelakufa" kanye "Institute for Noble emaNtombazaneni." Abalingisi, ababe partner Catherine phezu amasethi, khuluma ngalo 'njengeliphezulu actress abanamakhono nge amathemba esihle sesikhathi esizayo.
Julia Gusev (Asya Chernevskaya)
Julia livela Kazakhstan, yazalwa ngo-August 20, 1986. Wafunda ngo GITIS ku Yiqiniso MG Rozovsky. Okwesikhathi esithile, ngasebenza emsakazweni, ngokubhala izindaba zezingane. umdansi professional onguchwepheshe wesimanje umdanso-step isiqondiso.
Kuqondiswe ngu Julia A.I.Surikov wamema ngo-1998 ukuze ufake inkanyezi e ifilimu "Ngifuna ejele." Abazali ntombazane futhi wayengenayo khumbulani, ukuba umdlali ethile yafeza indima encane indodakazi protagonist.
Kusukela 2004 kuya 2008 Julia kudlalwa ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini "Nikitsky Gate". Kusukela ngo-2005 Gusev yaqala ukubonakala ochungechungeni. It kungabonakala kule "umphenyi", "isheke lomshushisi." Yiqiniso, udumo ulilethele indima yakhe Asi Chernevskii e ifilimu "I-Institute for Noble emaNtombazaneni." Ewuchungechunge yethelevishini, abadlali ngubani inkanyezi usuvele 2 no-3 izingxenye amaqhawe, unikezwa ukuthandwa izinkanyezi eziningi luthela. Yuliya Guseva, kanye nabanye abaculi, waba nengxenye imidwebo sokudubula "Izimfihlo we-Institute for Noble emaNtombazaneni" (ingxenye 2) kanye "Destiny we-Institute for Noble emaNtombazaneni" (Ingxenye 3). Lo mlingisi washada. Nomyeni wakhe umlingisi Yevgeny Buldakov.
Pauline Belenkaya (Barbara Kulakova)
Juni 6, 1986 - usuku lokuzalwa actress Poliny Belenkoy. Uyise engumqondisi abadumile Yuri Belenky. Kukhethwa mkhakha waqale ixazululwe ngoba Pauline kungokwalabo wonke lwamakhosi ifilimu umkhakha ithelevishini ochwepheshe.
Ukulingisa imfundo azithola ngaleso Higher Theatre School. Shchepkina (2007 - unyaka iziqu), ngokulinganisa ukutadisha eMnyangweni oqondisa VGIK.
Yena izinkanyezi ku-movie kokuqala kwenzeka lapho ngineminyaka intombazane eneminyaka engu-5 ubudala. Izibukeli eyaziwa ngokuba izindima zakhe ochungechungeni ithelevishini "Ondine", "kusho uDetective Agency" Ivan da Marya "," Kwakungumkhuleko abasebasha uthando. "
Ungqimba eyinhloko izindima ochungechungeni TV mayelana nesikhungo zokufundisa abesifazane yizicukuthwane abadlale abadlali abasha. "I-Institute for Noble emaNtombazaneni" kuyinto umsebenzi directorial kayise Pauline sika - Yuriya Belenkogo. Nokho, indlela ayikwazanga ubaba onothando inala ezinjalo izindima zabesifazane umeme omunye wabo ndodakazi yami? Mangisho ukuthi, naphezu ubuhlobo obuseduze nobani, umqondisi ezivuna Pauline enganikanga indima umculi osemusha uye wabhekana kahle. Lo mlingisi washada. Umlingani ayinakho maqondana ebhayisikobho.
Alain Sozinova (Miriam)
Allen wazalwa ngo-1983 e saseTomsk. Wafunda ngesikhathi eYekaterinburg Theatre Institute, ngemva kwalokho wathuthela enhlokodolobha. Sekuyisikhathi eside wayengowasebukhosini ilungu "Zuza" qembu, okuyinto wadlala nabaningi izindima. Indima Miriam, eqinisweni, isibe for DEBUT yakhe movie. Uchungechunge oluthi "I-Institute for Noble emaNtombazaneni", abadlali abathola udumo ububanzi ngemva kokukhululwa kwe-isikrini, bese ku-internet Alena kwaba isiqalo esihle. Yena njalo livela njengoba umethuli kwimidlalo ahlukahlukene.
"Izimfihlo we-Institute for Noble emaNtombazaneni": abadlali
Esikhathini phambili telenovela we-Institute for Noble emaNtombazaneni namakomidi yakhe, eyavela ezikrinini ngo-2013, uSophia iba unkosikazi lesisemtsetfweni Ukubala salibangisa kulesi sikhungo. Kukhona izingxenye 2 izindaba nezinhlamvu ezintsha. Lokhu umfundi, wayeseyitholile bekhiphe izinhlamvu kwesizini kuqala. Umnqopho we intombazane okuthiwa uLisa Vishnevetskaya okuyinto smart, enhle futhi onekhono, kodwa yinye into ekhona. Yena othanda Ukubala Orlov - womuntu futhi abangakufanelekeli kokuba idumela elibi.
Ngaphezu nabalingisi ozithandayo, lapha sibona Alina Kiziyarovu (Lisa), Sergeya astahova (indima entsha Vladimir Vorontsov oyiculayo), Dmitriya Varshavskogo (Andrei Orlov), Sergey Kolesnikov (Vishnevetskii), njll
"Ikusasa we-Institute for Noble emaNtombazaneni"
3 we telenovela ibizwa ngokuthi "Destiny we-Institute for Noble emaNtombazaneni." Abadlali owaba nengxenye ukuqopha, hhayi kakhulu wasakazeka izenzo ifilimu nezinhlamvu zayo, ngoba isithombe isesengaphakathi yeshashalazi. Lokhu kumele kwenzeke ngo-2016.
Esikwaziyo ukuthi kule ngxenye sizoxoxa ngempilo iziqu ezikhungweni ngaphandle isikhungo lapho zibhekene nazo zonke izinselele impilo yangempela.
Kungakhathaliseki isizini ikhanya 3 izindaba, kuphephile ukukhuluma mayelana nokuphumelela lonke uchungechunge "I-Institute for Noble emaNtombazaneni." Abalingisi, futhi indima kuthi baba nendima isikhathi eside bahlale inkumbulo izilaleli, njengesikhumbuzo sokuzinikela ezikhathini ezidlule lapho izikhulu kwaba isici esibaluleke kakhulu zonke intombazane.
Scarlett Johansson: ukuphakama, isisindo, biography, amabhayisikobho